PUBG Mobile Mod Apk 1.1.09.5 Vola tsy misy fetra [ny zava-drehetra] - marina Hack
PUBG Mobile Mod Apk 1.1.09.5 Vola tsy misy fetra [ny zava-drehetra] Free Download:
Salama ry mpitsidika! Manana apk tena manokana ho anao izahay izay niantso PUBG Mobile Mod Apk 1.1.09.5. Raha tena tianao ny mankafy ity lalao ity mihoatra ny mpilalao hafa dia misintona avy amin'ny tranokalanay.
PUBG Mobile dia feno fahafinaretana sy fialamboly. Ity lalao famotsorana amin'ny 23 ny diabe, 2017 afaka milalao ity lalao ity amin'ny namanao ianao. Mpilalao efatra amin'ny ekipa iray. Ny zavatra tsara indrindra amin'ity lalao ity dia ny fanananao modely maro isan-karazany amin'ity lalao ity.
Rehefa manomboka ity lalao ity ianao dia hiditra amin'ny lobby ary 99 ny fahavalo dia hiditra ao anatin'ny iray minitra. Eo am-piandohan'ny lalao dia ho tonga amin'ny fiaramanidina mandeha ho azy ianao ary hitsambikina amin'ny toerana tianao indrindra. Rehefa avy tonga eny amin'ny tany ianao dia mila maka ny basy tianao indrindra ary mamono ny fahavalonao haingana araka izay tratrao.
Azonao atao koa ny milalao sarintany samihafa toy ny miramar, sanhok, vondrona sns. Amin'ny maody arcade dia afaka milalao lalao sniper ianao, lalao haingana sy lalao ady. Misy ihany koa maodely evoground iray hafa.
Lahatsoratra taloha: Antso antso ho an'ny Mod Mod Apk 1.0.16
Amin'ny maody evoground dia afaka milalao karazana lalao ekipa fahafatesan'ny ekipa sy maody zombie ianao ary afaka milalao maody fitehirizam-boky. Ny maody malaza indrindra dia ny lalao fahafatesan'ny ekipa.
Amin'ity lalao ity dia misy ekipa roa ny ekipa tsirairay manana mpilalao efatra ary manana ianao 10 fotoana minitra sy ekipa isa ambony no handresy. Ity lalao ity dia manana sary ultra HD sy ny tahan'ny endriny faratampony. Mpankafy an-tapitrisany no tia milalao ity lalao ity, antenaiko fa hankafizinao ity lalao ity mihoatra ny lalao finday hafa.
PUBG Mobile Mod Apk 1.1.09.5 Endri-javatra tsy manam-petra vola:
Afaka mahazo maimaimpoana maimaimpoana ianao amin'ny zava-drehetra ao amin'ny lalao pubg maimaim-poana amin'ny alàlan'ny apk modinay. Ka raha manana fotoana ahazoana zavatra ianao amin'ny lalao dia inona no andrasana. Araho fotsiny ireo dingana ary sintomy ny PUBG Mobile Mod Apk 1.1.09.5 miaraka amin'ny fahasalamana tsy manam-petra, vola sy uc koa.
Milalao ONE ANDROID 4.3 +VERSION
SIZE FILE 38MB
Ilaina ny fakany TSY
Mba hankafizana ity lalao ity dia mila fitaovam-piadiana marobe sy loharano hafa. Dingana iray monja ianao hanatanterahana ny fanirianao ary ampidino fotsiny ity apk pubg mibile mod ity ary tsy mila mijirika uc, vola na fahasalamana ho an'ity tanjona ity.
Manana fampiharana vaovao izahay izay tena mora apetraka ary afaka mihazakazaka amin'ny rafitra rehetra nefa tsy manana olana. Na dia manana olana aza ianao dia omeo hevitra izahay eto ambany.
Fa maninona no tsy tokony hikaoty ny lalao finday PUBG?
Mety nahita fitaovana hack sasany ianao ho an'ny lalao pubg saingy tsy azo antoka ho anao ireo. Ny mpandraharaha lalao dia handrara ny kaontinao pubg raha manao ireo zavatra ireo amin'ny lalao ianao.
Betsaka ny tranonkala no milaza fa tsy hiatrika fahasahiranana amin'ny filalaovana ity lalao ity ny mpilalao toy ny:
Tsy misy Recoil: Player afaka mitifitra fahavalo lavitra tsy misy olana.
Tsy misy ahitra: Ny fampiasana an'io kinova hack io dia tsy hanana ahitra amin'ny lalao ianao.
Esory ny zavona: Afaka milalao tsara ianao nefa tsy manelingelina zavona.
Endri-javatra maro hafa notenenin'ny admin fa sandoka avokoa satria tsy avelan'ny mpandrindra PUBG hack ny lalao ataon'izy ireo. Manana endri-javatra matanjaka be izy ireo ary miaro ny lalao amin'izy ireo. Raha manandrana manao an'io ianao dia ho voarara amin'ny mpamorona pubg.
PUBG Mobile Mod Apk ve 1.1.09.5 Safe?
2nd zavatra dia raha mampidi-doza amin'ny lalao ny hacking pubg ka azo antoka ny mod apk ary ny valiny tsotra dia ENY. Satria miasa amin'ny alàlan'ity alalàn'ny mpandrindra lalao ity izahay ary mandoa ireto zavatra rehetra ireto.
(nitsidika 392 nitsidika, 1 nitsidika)
Tagged PUBG Mobile MOD APK Download maimaim-poanapubg mobile mod apk vola tsy voafetra android
Janoary 22, 2022 exacthacks
Desambra 28, 2021 exacthacks